Ukubukwa kwe-Billion $, ukuthula, ukuthula -izihambi ezihamba phambili - I-Airbnb
Ukubukwa kwe-Billion $, ukuthula, ukuthula -izihambi ezihamba phambili
303 okushiwo abanye
Ufuna indawo ekhethekile lapho ungaphumula khona, ubuyele emuva, futhi uzwe umlingo we-Bay of Islands? I-studio sami esinakho konke esenzelwe wena. (covid - Ukubuyiselwa kwemali okugcwele kunikezwa uma ukukhansela kudingeka)
Ukubuka okumangalisayo kwe-Bay futhi ngaphesheya kwe-Russell kuthatha umoya wakho. Uzozwa umuzwa wokuthula futhi uzivocavoce kahle, wamukele wena emhlabeni wakho omangalisayo.
Lena indawo ekhethekile yabantu abakhethekile, beza futhi bajabulele umlingo -ukuhlala okungaphezu KOSUKU!
Ukubuka kuvelele, ngaphesheya kwe-Bay kuya ku-Russell. I-seascape ihlale ishintsha njengoba kukhanya. Bukela izikebhe nama-cruisers eza futhi ahambe, asika imizila phakathi kobubanzi bolwandle. Kungaba nzima ukuzihudula endaweni emangalisayo.
Kulabo abathambekele emculweni, kukhona isiginci (uhlobo lwesiko le-viwi ngempela). Kungani ungazifaka zonke izinzwa zakho.
Thatha uhambo engadini, ume futhi unukise ama-roses, uthole indawo yokuzindla, noma uzikhethele amakhambi amasha ukuze wenze inkomishi yetiye (i-mint iyathandwa). Hlamba izithelo ezithile noma mhlawumbe uqoqe amaqabunga amasha, awusoze wazi ukuthi yini engase ibe nenkathi yonyaka.
I-studio siyisimanga futhi uzozithola usondelene ngokuphelele nokuthula kwaso. Ikhishi elinakho konke okudingayo ukuze upheke ukudla.
Kukhona nencwadi yokufaka imibala kanye namakhekhe kulabo abafuna ukwenza ukwelashwa kwengqondo.
Sicela uqaphele ukuthi kufanelekile kumuntu oyedwa kuphela.
4.91 out of 5 stars from 303 reviews
4.91 · 303 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-303
Indawo yangakithi inokuthula okukhulu. Umgwaqo wami yi-cul de sac futhi ngokuvamile ukuphela kwezimoto ezihamba emgwaqweni ngabantu bendawo noma abantu abalahlekile.
Ngezansi nje kwegquma ngase-Te Haumi Bridge kuyindlela yokuhamba eya e-Opua. Idlula ehlathini nasemabhishi futhi inhle ngempela. Iqhele cishe ngamahora angu-1.5.
Ngisebenza ngisekhaya (ngibhala) futhi ngivame ukuba seduze futhi ngijabule ukuphendula noma yimiphi imibuzo, ngiphakamisa izinto engingazenza futhi ngizibone, noma uma ngingematasa, ngingakujabulela ukuxoxa, noma ngihlanganyele iwayini noma ubhiya. Kuye ngesikhathi sami, ngiyakujabulela nokupheka futhi ngihlanganyele isidlo sakusihlwa, noma kwezinye izimo, ngikuphathele ukudla kwasekhaya okuphekiwe okuhle kakhulu oke waba nakho, (Ngihle futhi ekudleni kwabantu abangayidli inyama nemifino uma lokho kuwukushaya kwakho). Futhi, kuye ngokuthi ngingakwazi ukukuyisa kwezinye zezindawo engizithandayo, noma ngibe nepikiniki ebhishi, noma ngiye ukudoba.
Uma ufuna nje ukuba wedwa, khona-ke yiba njalo.
Ngisebenza ngisekhaya (ngibhala) futhi ngivame ukuba seduze futhi ngijabule ukuphendula noma yimiphi imibuzo, ngiphakamisa izinto engingazenza futhi ngizibone, noma uma ngingematas…